ဗီချိုင်းသေဆုံးခြင်း ရှိ၊ မရှိကို လက်စတာအသင်းက သတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး
လက်စတာကွင်းအနီး ပျက်ကျခဲ့တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ထဲမှာ လက်စတာအသင်းပိုင်ရှင် Vichai ပါဝင်တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်
28 Oct 2018 . 9:40 PM
လက်စတာအသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်း King Power Stadium အပြင်မှာ လက်စတာအသင်းပိုင်ရှင် ဗီချိုင်း Vichai Srivaddhanaprabha ရဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျခဲ့ပြီး အဲဒီရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှာ ဗီချိုင်းအပါအ၀င် လူ(၅)ဦး ပါဝင်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဗီချိုင်းဟာ စနေနေ့က လက်စတာနဲ့ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲကို လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ပွဲအပြီး သူ့ရဲ့ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ အပြန်မှာ ပျက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကတော့ ဗြိတိန်စံတော်ချိန် ည(၈း၃၀)လောက်မှာ ဖြစ်ပြီး ရဟတ်ယာဉ်ဟာ အပေါ်ကို တက်ပြီးမှ ၀န်ထမ်းတွေ ကားထားရှိတဲ့ Car Parking ထဲကို ရုတ်တရက် ပျက်ကျခဲ့တာပါ။
ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ အရေးပေါ်အဖွဲ့တွေဟာ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း အဲဒီနေရာကို အမြန်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ထိခိုက်မှု မရှိအောင် ရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှာ ဗီချိုင်းနဲ့ ရဟတ်ယာဉ်မှူး အပါအ၀င် လူ(၅)ဦးပါဝင်တယ်လို့ လက်စတာအသင်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့တယ်။ လက်စတာအသင်းကတော့ ဗီချိုင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိအကျ သတင်းမထုတ်ပြန်သေးသလို ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကလည်း သေဆုံးသူရှိ၊ မရှိကို အခိုင်အမာ ဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဗီချိုင်းရဲ့ အသက်အန္တရာယ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်စတာပရိသတ်တွေအပါအ၀င် လူ တော်တော်များများက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
အဲဒီရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှာ ဗီချိုင်းရဲ့ သားနဲ့သမီး၊ လက်စတာအသင်းဒါရိုက်တာတို့တော့ မပါဝင်ခဲ့ဘူးလို့ ဗြိတိန်မီဒီယာတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ ဗီချိုင်းဟာ အရင်ကတည်းက လက်စတာအသင်းရဲ့ပွဲတွေကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ လာကြည့်လေ့ရှိပြီး အခု ဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပ်ဆိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။
အသက်(၆၁)နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဗီချိုင်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တတိယမြောက် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ လက်စတာအသင်းကို ၀ယ်ယူခဲ့သလို သူ့လက်ထက်မှာ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အမြင့်မားဆုံးအောင်မြင်မှုအဖြစ် ပရီးမီယားလိဂ်ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Photo:Nikkei Asian Review,Sports Illustrated,Deccan Herald,Oblysh News
လကျစတာကှငျးအနီး ပကျြကခြဲ့တဲ့ ရဟတျယာဉျထဲမှာ လကျစတာအသငျးပိုငျရှငျ Vichai ပါဝငျတယျလို့ သတငျးထှကျပျေါ
လကျစတာအသငျးရဲ့ အိမျကှငျး King Power Stadium အပွငျမှာ လကျစတာအသငျးပိုငျရှငျ ဗီခြိုငျး Vichai Srivaddhanaprabha ရဲ့ ရဟတျယာဉျ ပကျြကခြဲ့ပွီး အဲဒီရဟတျယာဉျပျေါမှာ ဗီခြိုငျးအပါအဝငျ လူ(၅)ဦး ပါဝငျတယျလို့ သတငျးတှထှေကျပျေါနပေါတယျ။ ဗီခြိုငျးဟာ စနနေကေ့ လကျစတာနဲ့ဝကျဈဟမျး အသငျးတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲကို လာရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ပွီး ပှဲအပွီး သူ့ရဲ့ ရဟတျယာဉျနဲ့ အပွနျမှာ ပကျြကခြဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အခြိနျကတော့ ဗွိတိနျစံတျောခြိနျ ည(၈း၃၀)လောကျမှာ ဖွဈပွီး ရဟတျယာဉျဟာ အပျေါကို တကျပွီးမှ ဝနျထမျးတှေ ကားထားရှိတဲ့ Car Parking ထဲကို ရုတျတရကျ ပကျြကခြဲ့တာပါ။
ရဲတပျဖှဲ့နဲ့ အရေးပျေါအဖှဲ့တှဟော ဖွဈဖွဈခငျြး အဲဒီနရောကို အမွနျဆုံးသှားရောကျခဲ့ပွီး ပတျဝနျးကငျြက လူတှေ ထိခိုကျမှု မရှိအောငျ ရှငျးလငျးခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီရဟတျယာဉျပျေါမှာ ဗီခြိုငျးနဲ့ ရဟတျယာဉျမှူး အပါအဝငျ လူ(၅)ဦးပါဝငျတယျလို့ လကျစတာအသငျးနဲ့ နီးစပျတဲ့အသိုငျးအဝိုငျးက လူတဈဦးက ပွောကွားခဲ့တယျ။ လကျစတာအသငျးကတော့ ဗီခြိုငျးရဲ့အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျပွီး အတိအကြ သတငျးမထုတျပွနျသေးသလို ဗွိတိနျမီဒီယာတှကေလညျး သဆေုံးသူရှိ၊ မရှိကို အခိုငျအမာ ဖျောပွခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဗီခြိုငျးရဲ့ အသကျအန်တရာယျနဲ့ ပတျသကျလို့ လကျစတာပရိသတျတှအေပါအဝငျ လူ တျောတျောမြားမြားက စိုးရိမျနကွေပါတယျ။
အဲဒီရဟတျယာဉျပျေါမှာ ဗီခြိုငျးရဲ့ သားနဲ့သမီး၊ လကျစတာအသငျးဒါရိုကျတာတို့တော့ မပါဝငျခဲ့ဘူးလို့ ဗွိတိနျမီဒီယာတှကေ ဖျောပွခဲ့ကွတယျ။ ဗီခြိုငျးဟာ အရငျကတညျးက လကျစတာအသငျးရဲ့ပှဲတှကေို ရဟတျယာဉျနဲ့ လာကွညျ့လရှေိ့ပွီး အခု ဒီလိုစိတျမကောငျးစရာ ဖွဈရပျဆိုးနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတာပါ။
အသကျ(၆၁)နှဈ အရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ ဗီခြိုငျးဟာ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ တတိယမွောကျ အခမျြးသာဆုံး ပုဂ်ဂိုလျဖွဈပွီး ၂၀၁၀ ခုနှဈမှာ လကျစတာအသငျးကို ဝယျယူခဲ့သလို သူ့လကျထကျမှာ အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အမွငျ့မားဆုံးအောငျမွငျမှုအဖွဈ ပရီးမီယားလိဂျဖလားကို ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
by Naing Linn . 42 mins ago